Misy rangahy iray izay zany,
Hoy izy momba an'ity toerana iray eto Antananarivo renivohitra:
“T@ 1973 aho niala teto, efa nisy olana fako be ohatran'izao teto @ ity toerana ity „
05/06,2022 Sokajy Rediredy
Lasalasa saina tampoka teto ah... nisy namana narotsoratra hoe efa folo taona lasa izay.
Dia gaga hoe kay le, izany tokoa moa izy ity ðŸ˜‚
Dia niezaka nitadidy sy hoe mitady arsiva hoe inona avy tokoa no mba malaza sy hoe tiako t@ folo taona lasa tany... hoe mba hanao retrospecitva tsotsotra... kinanjo, izay vao tena tonga saina sy marary fo fa otran'ny tsisy hoe zavatra malaza na hoe "d'actualitE" @ izao intsony izany... asa, tena efa antitra sy hoe Ntaolo tokoa angaha ny tena ðŸ˜Ž
Dia izay ee... soa ihany fa mbola misy ny blaogy fa raha tsy izany tena mety hoe tsy hita trasy sy tsy fantatry ny oniversa akory hoe mbola velona any ihany...
Izay ee. Lahatsoratra secret chhuuuut, atolotra manokana hoan'ireo namana mahatsiaro ity. Soava tsaraha, ho tahian'Andriamanitra ðŸ™
Vao hitako vao teo fa mbola misy ny serie Grey's Anatomy => na dia niova daholo aza ny zava-drehetra, mbola misy ihany ny taloha, na dia efa hoe soara sy tsisy mpanaraka tsony aza ðŸ˜„ asa re, mbola azo asiana revin-gadra sy rediredy fahizay indray va re? sa hoe souvenira souvenira no tena maha-manja azy...
11/18,2021 Sokajy Diary
Ahoana koa itony?
mba initiative tsara...
sao dia mba misy te hampiaraka any
tsy hoe mitoraka ah fa otran'ny hevitra metimety ihany izy ity...
Ra mba misy afaka mitantara na hoe manome hevitra momba an'le izy no vao mia koa manja!
11/09,2021 Sokajy awesome
End of an era... mivalona ny tantara.
Tsy misy ambara na ho tantaraina. Mivavaka hoan'ny fanahiny.
Tadidiko fotsiny ity, somary nampitsiky ahy ny fahatsiarovana fa
Nanao paompy, petite serie de 12 izy refa nitontona teny Ivato ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜ŽðŸ˜Œ
¡Rombo rombo rombo!
03/29,2021 Sokajy Diary
Ry havana malala, indro fa tonga ny ora hitorian'ny mpanompon'A/tra ny teniny ðŸ˜‚ðŸ˜Ž
Tsy otran'ny mifandraika @ izany ve ilay vavaka nampianarin'i Jesoa hoe: ho tonga anie ny fanjakanao, eto Madagasikara tahaka ny any an-danitra!! ðŸ˜”ðŸ˜
resaka tsisy dikany...
confinement, t@ 1ere session an'ny corona t@ avril no nahalalana (au sens biblique) ny rap sinoa:
2eme session, @ izay avy eo... isaky ny zoma... mufasa
entre pa, lasa otran'ny roman ny fifidianana an'i Bekintana an.
Mbola tsy nanaraka ny fifidianana tany ohatry ny t@ ity taona ity ah. Na t@ Obama 2008 aza, marina fa niarin-tory niandry valiny... fa zao tena lasa manaraka mintsy hoe state aiza sy aiza no mila arahana... inona ny dikan'zany electoral votes... enfin bref, Donald doly no nahatonga an'zany ee ðŸ˜€
Ny tena decouverte hitako anefa dia i Jo Jorgensen. Hoe iza koa ary itony mintan-jiro itony... sady tanora no vehivavy... tsy mba ohatran'ireto anti-dahy anaki-2 mila maka retirety ireto...
Asa, ny mba hany mety hahatsara fiafara an'ity tantara inty nga dia ny hoe: tonga i Joe, hanokatra ny lalana hoan'i kala Kamala yayyyy ðŸ˜Ž
C'est la whaaaaat??
11/06,2020 Sokajy Diary
Misavoritaka be ny eritreritro… mikasika ny zava-misy, asa na ilay hoe confinement manome faux-fahalalahana angaha. Bref, soratsoratana fotsiny eto izy… enganie mba hisy hamaky <= ianao io, futur moi ihany koa.
Sarotra be ny mitsikera ny hoe ataon’i rafanja sy ny mpitondra satria krizy mafonja ary tena hoe tsisy hoe nateraka na hoe nohalehibiazina hiatrika zavatra toy izao.â€¨ Raha tsisy confinement dia asa, marina fa misy ny tsy ho faty fa tena mety ho aman’hetsiny no ho faty. Ny antsika hono kay azo isaina @ rantsa-tanana ny respiratoire artificiel.
Dia izay e, ankoatry ny hoe genocide sy hoe crime contre l’humanite… dia ny hoe raha ny RAD na havanao no lasa, ho vitanao ve ny hijery fotsiny?â€¨
Raha asiana confinement anefa. Isika mazava fa firenena mahantra. Izay tsy vitan’ny corona, ho vitan’ny fahantrana. Marary ary ory ny fo maheno ny tantara hoe tantsaha mandeha an-tongotra adiny firy, hande hivarotra entana dia adiny 1 fara faha-betsany no afaka mivarotra. Sady reraka no maty antoka kanefa tsy afa manoatra. Mahatra ve moa ho aiza eo.â€¨ Ra ianao tokoa moa no eo @ toerana: raha tsy mihinan-kanina siora fa ho faty, raha voan’ny corona mety misy chance tsy ho faty. Mazava ny lalana. Mety eo @ 2 na 3 volana eo ho eo @ fahatongavan’izany isika. Tsy maniry loza aho fa mety ady an-trano sy adim-poko no hiafaran’io. Dia miverina @ ilay aman'hetsiny teo ihany.
Asa ity raha hoe kobon’i rafanja fa aleo tenenina ihany ny hoe: mbola vao manomboka ny lalao eto amintsika.â€¨ Mazava ve ny stratejia-antsika? Misy ireo manao hoe ekena fa tsy maintsy ho voa daholo ny rehetra fa atao ny confinement mba tsy hibosisika be loatra ny fidirana hopitaly dia mba hoe mahazo immunite tsikelikely ny firenena, mandra-pivoakan’ny vaksiny. Ny antsika ve hoe ho fohanana tanteraka ny tsimo-karetina? dia ho hakatona firy volana izany ny aeroport? ho voatandrina ve izany? Asa, mila mivavaka ihany hoe tena mandaitra tokoa ilay covid-organics… mety gidragidra raha tsy izany.
Averiko indray: mety mbola volana maromaro no hiarahana miaina @ i corona. Ary mbola tsy manomboka akory ny vokatry ny tsy famokarana sy tsy fiodinan'ny toe-karena, nateraky ny confinement.
Diso mafinaritra ahy loatra ity kozin’ingahy Obama ity. Ny hoe finoana, fanantenana amin'ny fiovana mafonja sy mavaitra… indrindra rehefa @ toetr’andro tsy manan-tsafidy toy izao ny mpiara-belona, mpiray tanin-drazana…
Apetraka eto ary ny fanotaniana sy resa-dresaka manitikitika. Ny tanjona dia ny hoe hanodinana an’ity krizy ity mba ho opportunitEs, sy tohatra hisian'ny tena fiaingana makany @ tany nampanantenaina
Mety misy opportunitE hanangonana donnees @ hoe baseline na hoe toerana farany ambany tiana ampiankarina @ politika ekonomika sy sosialy an’ny firenena ny fanomezana an’ilay hoe vatsy fanampiana ny tokatrano sahirana. Nahoana tokoa moa no tsy ho azo tohizana ireny na corona na tsy corona? tena hitako fa zavatra tsara be mihintsy ny nataon’ny Lula tany Brezily nanao zavatra hanampiana ny mahantra. Tsy voatery hoe vola na kaly fa na hoe asa na hoe trano na sanitaire na otran’zany…
Eo ihany koa ny hoe mouvement an'ny vokatra/sakafo, ny habetsany sy ny hoe toerana hiaviany avy any ambanivohitra. Ny sektera informelle kely rehetra sy ireo izay mbola tsy voarefy hatr@ izay.
Manomboka @ fananana donnees fiables, eny fa na dia hoe faritra vitsivitsy fotsiny aza... ny ahafaha manao zavatra lehibe kokoa, projections sy hoe cadrages macroekonomika.
Tsy fotoan’ny hampifohazana ny hambom-po an’ny firenena ve izao? sady 60 taona no fahaleovan-tena.â€¨ A la base (ozy ny tanora) tsy maintsy manomboka @ indostrialization foana ny fandrosoana.â€¨ Nahoana isika no tsy mba afaka manosika hoe fambolena a grande echelle (bedabe ny hoe kere eto afaka 3 volana an — ary tsy afaka ny hividy/hanafatra any ivelany akory fa satria samy tsisy manana daholo). Misy firenena afrikana tena hoe izay tazaninao iray manotolo katsaka daholo. Na hoe akondro na vary na ovy na box… izany ve dia tsy vitan-tsika?â€¨
Sektera segondera ireny. Manodina ankora ho zavatra ampiasaina eto @ tanana. â€¨Nahoana no tsy mba afaka mamorona zavatra eletronika? na hoe motera kely na fanamboarana machine fitotoam-bary aza tsy vita eto… nefa mino marimarina aho fa betsabetsaka ihany â€¨ny bandy/sipa avy any @ polytech afaka mi-trav @ zany.â€¨ Tsy ho vitan’ny gasy ve ny manamboatra hoe respiratoire vita gasy ohatra… Na tsy hoampiasaina zao aza mety ilaina foana izany any aoriana any.
Science and technology: izany koa ny hoe tsy maintsy atao fototry ny revolusiona. Nareo ve tsy mba lasa saina na hoe mitsiriritra mahita an’ireny hoe North Korea, na hoe Iran dia firenena faran’izay hoe voasazy sy hoe tsy afaka manao na inona na inona kanefa dia mbola lasa lavitra be mihoatra an’i Madagasikara ihany?â€¨
Mila visionera ve vao hahita hoe mila manam-pahaizana, mpikaroka mifantoka @ zavatra eto an-toerana isika? ilaina ny teknisianina. Teknisianina liana @ fanaovana zavatra mifandraika @ ilain’ny firenena. Teknisianina tena izy. Ny antsika manko teknisianina mpanenjika boritra no tena betsaka. Marina fa ilaina ny boritra fa ny zavatra atao sy ny vokatra no mbola ambony kokoa. Ilaina ho teknisianina ny teknisianina fa tsy ilaina ho atao sefo. Ny antsika ny hoe sefo sy deba foana no mahamaika.
Efa voamarika ve ny lalana sy hoe sektera stratejika antsika?
Zavatra hifanarahana fa ho andrin’ny fandrosoana ka na iza mpitondra na iza mpanongam-panjakana ho avy eo dia hitandrina izany toy anakandria-maso avokoa.
Aiza ho aiza ny hoe fahaleovan-tena ara-enerjia?â€¨
Zao zao no mora ny solika… Mba misy fika hanosehana ny Jirama ve?
Na ho marina na ho diso ny visavisa fa ny manetsabe mbola hoavy @ corona, dia tokony miomana rafanja. â€¨sao dia tokony ampanjairina (a grande echelle) dieny izao ny fitaovana ho ilain’ny dokotera sy ny sage femme. Ho hilain’ny mpitandro filaminana.
Ra vao ireo no tsy poinsa dia anarchie no mivoaka eo.
Ny fanaovana test, tsy ho zakan’ny Institut pasteur irery io. Tena erreur goavana be mihintsy ny tsy fahampian’ny test. Tena mety tonga dia hirongatra be mihintsy io ra vao tsy ampy ny test. Nahoana no tsy aparitaka ny fahaiza-manao ny test? Mila fiofanana firy taona vao afaka manao an’zany? Tsy manana olona nga isika?
tena hitabe mihintsy ny difference rehefa hoe samy mandray an-draikitra ary omena fahefana/fahalalana hitantana ny diany ny any ampotony.â€¨ Tsy ho zakan’ny di-doha sy baiko mihidina avy an-dapa io rehefa hiparitaka manerana ny nosy ny valan'aretina.
Jereo fa misy firenena vitsivitsy somary miavaka @ ny nandraisany sy niantrehany an’ity corona ity. Dia mazava be fa tsy olona anakiray foana no omnipresent @ zao rehetra izao.â€¨
Tsy ho @ corona ihany fa ny zava-drehetra ambiny, indrindra fa ny resaka sosialy sy ekonomika, izay hita fa tena ngoza lavitra.
Marina alou fa nisy fivoarana ny fanarahan-dalana sy ny hoe minimum de semblance @ etat de droit eto amintsika… kanefa…â€¨ somary mahagaga sy hoe mampa-tahotra ihany ny hoe otran’ny tsisy lalana na mba hoe loi de finance rectificative fotsiny aza navoaka fa tonga dia “didy” daholo ny zava-drehetra.â€¨
Tsy voatery manaraka ny tandrefana foana akory isika ary mety manana ny hoe fomba demokratika antsika isika fa zany hoe mitarika any @ diktatiora ny fikasokasohana lava loatra @ fahefana tsisy mpametra sy manara-maso.
Tsy mba mahatalanjona anareo ve hoe na i Trump jiolamboto faran'ze zokiny iny aza ve tena tera-tsemboka mihintsy hanaovan'ny mpanao gazety azy. Aiza ho aiza @ izany isika?
Rahoviana vao hisy minisitra ho tera-tsemboka sy ho toy ny boay kely miatrika mpanao lalana eny Tsimbazaza?
Tsy fotoana tokony hanehoana ny tena hoe fitiavan-tanindrazana sy hoe fitiavana ny vahoaka tokoa ve izao?â€¨ Ny role sy hoe asan’ny opposition no tiako hahatongavana eto. â€¨Ny ankamaroan’ny “mpi-adversaire” politika maneran-tany rehetra samy nikaon-doha ary miara-miasa @ fitondrana daholo satria hita fa tena latsaka lalina ny firenena. â€¨Mba aiza ho aiza isika? mbola ilay interet personnelle foana ve? asa…hevitra miady ve moa tsy hisy fa ny hoe mbola hifamingana ihany nefa efa loza mitatao be. Ny politika mivadika ady personnelle moa dia tsy lazaina intsony.
Nareo ve tsy mba mitsiriritra mahita an’ireny hoe John McCain sy Joe Biden bandy akama be, nefa tena hoe sakay sy maso @ ideolojia ara-politika.â€¨ Nahoana no mpinamana i Bush dadany sy i Bill Clinton kanefa ny iray no nanala ny iray teo @ fitondrana?â€¨
Ra tsy misy stabilite politka eto tsisy zavatra vanona izany. Na IEM io na MAP na emergence 2030… tsy rocket science izany ozy ny voanjo… Izay rehetra eo @ fitondrana tokony hahatsapa fa izy no ho mpanohitra rahampitso.
Asa ianareo raha mahatsikaritra ny hoe marketing sy hoe mythe any @ Bekitana ny @ hoe American dream.â€¨ Izay averim-berina matetika hoe ity no tany hahafahan’ny tsirairay manan-tanteraka izay nofinofiny. Rehefa miasa mafy, milofo sy mikiry dia tsy maintsy tafita: arizato ampaosy no ho millionera. Dia lasa kolon-tsaina ary tena inoan’ny olona tokoa. Izany no mampiray hina sy hoe mampiara-mandroso ny rehetra.â€¨
Tsy mba misy hoe Revy sy nofinofy Malagasy ve? â€¨Ny antsika manko dia ny hoe valala an-karona no mampalaza antsika. Izay mba tafiakatra sady tsy misitona ny hafa hiakatra fa mandetika aza. Ny hafa ihany koa tsy mba miezaka hiakatra fa ny hisitona ny tafiakatra hidina ihany koa…
Misy teny malaza manao hoe vao mia mamiratra be ny trano raha misy labozia mamiratra mamindra afo hamiratan’ny labozia hafa. Tsy mampihena ny famiratanao ny famiratan’ny hafa. Vao mia aza mampitombo be ny famiratana miaraka.
Asa mety hevitra tsara ihany ny manao “marketing” kely ny fampietanana ny fitiavan-tanindrazana. Izay manomboka @ fitiavana ny mpiara-belona. Miara-mientana, miaraka manova toe-tsaina, miaraka mandroso, miaraka samy tsy hanaiky ho resin’ny fahantrana, ho resin’ny corona.
Ny mitabe tsy lanin'ny mamba hono. Tsy efa fotoana tokony hamerenana ny fihavanana tokoa ve izao. Ary raha refesinao @ fahafahanao manampy ny hafa ho tafita, ny hoe mahatafita anao? Raha tafita irery ianao dia tsy tafita izany. Raha mihoatra ny iray no miaraka tafita, noho ianao dia izay ianao vao tena tafita.
Atsipy ny teny, ampon’ny mahalala.
Mino marimarina aho fa tonga ny kihon-dalana izay hiarinan’ny firenena.
Hatr@ izay manko isika, isaky ny misy rotaka/krisy foana no hitrangan’ny mesia, na hoe faux-mesia manome faux-espoirs. Izay somary havanana @ fanonganam-panjakana fa resin-tory sy naka goka @ fitondrana makany any @ tombon-tsoa manokana avy eo. Dia miverina mivarilavo isaky ny 10 taona migrevy sy manongam-panjakana eto foana isika.
Amin'ity indray mitoraka ity kosa izany dia ny fiainana (sa hoe ny oniversa? na A/tra?) mihintsy no hitondra ny mesia. Na koa hoe mety hampa-lasa ho mesia antsika rehetra.
Eny, arahim-bavaka. Arahin’asa sy hoe fandavan-tena ary fahatokisana ihany koa.
â¤ï¸ ðŸ‡²ðŸ‡¬ â¤ï¸ ðŸ‡²ðŸ‡¬
04/23,2020 Sokajy iozifol
C'est sosotra + fo
Vao hitako vao teo tao @ fb ity... tsy haiko alou na fake news na ahoana fa mivoaka ao @ lexpress alou dia aleo resahana fa tena URGENT sy VENDRANA ary MAHAMENATRA be loatra:
Tsy mahazo mivoaka ny firenena hono ny vehivavy ra tsy miaraka @ lehilahy
Aiza ho aiza ao @ IEM ary no misy an'io... sa @ fomba ahoana @ io ny fahatongavana @ emergence? sao dia mba fefy diso toerana ary indrindraindrindra hoe c'est du n'importe koi!!
Dia tsy mba naheno debat na otran'zany na hoe fampilazana na fandaniana lalana mikasika an'ity fa toa otran'tena tampoka sy surprise be kanefa tena ouiiiiiiiiiin be... ka hoy ah hoe aleo velesina ny tako-bilany fa otran'ny kozy voretra be ity fika ity an!!
Sahia mijoro, miady @ tsy rariny ary indrindraindrindra ny mitaky ny fitovian-jo ho an'ny vehivavy!!
Mila fanazavana io ary mila ahitsy sy fohanana avy hatrany!!
Mampandroso ny firenena ve io? inona ny zavatra mihatsara vokatr'io?
10/05,2019 Sokajy Diary
Zay ndray ah vao tafaverina eto... betsaka ny tsy voalaza sy mbola ho lazaina fa zao alou
Fitokonana, fihaonambe, fiaraha-manotrona ny @ tontolo iainana
Amin'ity planetantsika ity
@ Zoma Sep 20, 2019
Eto amin'ny tanana:
Manerana ny tany:
Aza variana na midonaka fa teto daholo ny olona no naka!!
09/17,2019 Sokajy Diary
Tara be an'ity ah omaly tontolo ny andro
Ny feonao no itiavako labiera
Sa ny labiera no tiakoa dia mody feonao!
Androany vao nifoha ndray, nahita an'ity
tonga dia ouii je le veux be
Tahirizina sao mahasoa... indrindra @ andro somary manjombona sy mahakamo, ilana tsikitsiky ireny
02/05,2019 Sokajy awesome
Tsara fa tohizo!!
Tsy hihomehy loza ah fa ra zao no mitohy @ 2030 ngambany ny generaux no betsaka noho ny isan'ny mpampianatra eny @ oniversitE... sa izay ve le plan emergence?
09/11,2018 Sokajy Rediredy
Tsy hihomehy loza a
Not your typical graduation picture ðŸ¤·ðŸ½‍â™€ï¸
nalaza tato ho ato...
08/07,2018 Sokajy Rediredy
Asa raha efa hitanareo ity. Ted talk nataon'i Justin Baldoni, momba ny hoe kely endaka ny lelah be endaka... d'actualitE, tsara tadidiniana, isan'andro isan'andro fa tsy @ 08 Martsa ihany. Tiako, zaraiko,
Azo jerena ao @ ted, ra mila dikan-teny soutitre eny ambany. Misy resaka maromaro mifandraika @ ilay lohahevitra koa.
03/11,2018 Sokajy awesome
Asa raha efa hitanareo ity. Ted talk nataon'i Justin Baldoni, momba ny hoe kely endaka ny lelah be endaka... d'actualitE, tsara tadidiana, isan'andro isan'andro fa tsy @ 08 Martsa ihany. Tiako, zaraiko,
03/11,2018 Sokajy iozifol
tsiahy, an'i Dolores O'Riordan...
lanitra mangamanga... dia izay sisa ee
01/15,2018 Sokajy Diary
Vacances de peste!
Io zany ny teny tena nampa-waaaaaaaaaaaaaaaa be anah t@ ity taona ity ee. vacances de peste. 2017. voila.
Eto ampamisavisana ny zavatra be dia be tiako ho nosoratana t@ ity taona ity fa tsy vita ah. Tsisy ekskizy io fa ekena tsotra fotsiny hoe c'est la vie!!
Dia nahatsiaro hoe ity ny nampitsiky anah indrindra
Aleo zaraina fa tena cover hafa kely mihintsy an'ity hira misy devoly ity hahaha
Miray soa antsika rehetra. Mety ho hafanafana ny raharaha politika eto @ firenena fa irariana mba ho soa sy fahasoavana ho an'ny rehetra izay mitranga. Indrindra mba tsy hisy epidemia na aretina hafa indray.
Samy ho tratry ny goavy ee!
12/29,2017 Sokajy awesome
ouainnnnn be androany... Noho ny antony vary misy loaka izany dia antsasaky ny train ihany no tonga/hande... kanefa bedabe ny mpanao vakansy. Dia evidawazy fa feno be otran'ny any Inde ireny le izy...
Indro ary misy sipabeu somary sahirana mitady toerana. Manao azafady @ ireto tanora mpanao backpacking izay nivalapatra eraky ny tanana... dia mba hoe galant zany ah dia hoe tsy manin ra eto @ sezako enao mipetraka. Miezaka manazava sady mijery ny kibony... valiny: za nga bevohoka?
efa mpahazo anah taloha ity fahadisoana ara-teknika: hoe bevoka ary ve sa matavy fotsiny... neveriko fa efa sitrana kinanjo...
07/03,2017 Sokajy Rediredy
c'est le aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Somary tara kely ah vao nakobo an'ity tao @ fb... na zany aza tiako ankalazaina satria... ity angamba ny zavatra faran'izay mafinaritra indrindra @ ity taona 2017 ity:
Tonga dia lasa patriotika tampoka be tato ah!!
... ny lesoka kely ozy ilay vary misy loaka dia... otran'ny tsisy mpivarotra akanjo "maillot" hoan'ny mpankafy/mpanaraka an? Sa tsy maintsy makeny behoririka vao hahita? sao dia mba bizina tokony atao ity kle?
Ary indrindra ihany koa hoe tokony hankalazaina sy hoe hamporisihana ny bandy kely mba hanohy an'izao dingana mafinaritra be izao... Tsara fa tohizo!!
Mirary ny soa sy tsara ary ho tonga @ ambony indrindra!
voilu voili voilo
06/11,2017 Sokajy awesome
C'est le "brilliant"
Nisy an'ity pub ana tele iray avy any Dänemark ity, maha-lasa fisainana
04/18,2017 Sokajy awesome
Misy resto italianina iray izay zany. Somary @ toerana chelou chelou otran'ny hoe eny anosy eo akaikin'ny tsena zany. Tena tsy ampoizina hoe ho azo iafiana. Vitsivitsy olona ary Menu standard, tsy lafo. Fa ny tena nahagaga dia mandefa mozika somary retro retro tsy haiko na eros ramazotti zany na inona fa dia tena ambiance hafakely mampa a l'aise be.
Tao aorinan'ny mozika fanin-droany niova nefa mbola meme genre ihany, dia vaky vava ah hoe: kay le, ary reveko be kosa ilay feeling an'le mozika ato an. Dia misy couple antitra be etsy amin'ny ilany. Namaly ilay ranga hoe: ie tena mahafinaritra mihintsy. Efa 20 mahery zay no mankato noho ilay rythme mozika. Ra t@ taona sivy folo tany ianao no mankato dia mbola otr'izao ihany ny hira mande ato.
Fahendren'ny antitra ve ny tsy fitadiavana zava-baovao? izay no mahasalama azy?
03/12,2017 Sokajy Diary
aoka ny tantara no hitsara...
fa amiko dia mendrika kokoa noho i mandela izy... eny fa dia azo lazaina aza fa tsy tena mitovy ny tolona...
Ho tsaroina, ho tadidiana ary ho tsiahiana... amin'ny anaran'ny tolona.
11/26,2016 Sokajy Diary
Tsiky du jour
Vao nifoha ah dia nahita an'ity
asa ra mba misy afaka manao ny organigrame mifandraika... @ rafitra misy eto @ tanana
in re ny azo iantsoana ny filoham-pirenena -sarcatiskament- eee ?
08/24,2016 Sokajy awesome
Hitako tato vao teo... glita paolino bernabe M20
Zany hoe andramena anakiroa zany vao mahazo mananasy kle hehe
oops, Erratum: maika loatra ah niteny
Hay ny royal kay vaints kle... aza omena tsiny ra mibizna ny kil,, izay tsy nitia vola taminareo no aoka hitoraka azy ireo!!
bla bla bli bli blo blo
07/24,2016 Sokajy awesome
07/07,2016 Sokajy Rediredy
Tara train, mais bon... qd faut y aller, faux y aller
- Zavatra azo atao @ mananasy. Ny ankamaroan'ny sakafo mexikana tsara otran'ny misy mananasy.
- Sary misy mananasy. Interessant!
- Kay le, otran'ny mafinaritra ra manao an'ity i voahangy an. hevitra cadeau d'annif zany ra-prezi an... kiiii sold out ony ee too bad!
- Zany hoe ra tsy vadin'ny filoham-pirenena enao, dia aza kivy fa misy eny behoririka. Aza variana na midonaka fa teto doly ny ol no naka!
- Misy ao @ urban dictionary: euh ity sa ity hu hu hu
- Minana mananasy be loatra ve ny dragona, no mahatonga ny atodiny otran'ny mananasy? khaleeessi!!
- Tsy misy afa tsy mananasy ony any Costa-rica... poinsa mety hanao vacansa any ny filoha.
- Zavatra azo resahana kanefa tsy mananasy:
* Fahandriam-pahalemana, ohatra hoe bomba, dahalo... efa tratra ve i remenabila?
* Code de la communication... ahoana ihany le article 20
* sns sns ohatra hoe fahantrana: toe-karena, sosialy... in avy re ny zavatra tsy mande @ ze lahoriny eto @ firenena ee. Otran'ny tsy mahita ah an, sarotra be izy zany!!
Efa kely sisa dia hitovy @ bekitana isika satria ny akanjon'i Michelle koa misy mpanaraka be. Koa eto ampiandrasana ny hoe firenena mandroso akanjo-ho-anaovany-manaraka ary ny mpanoratra, dia mirary soa anao mpamaky.
07/05,2016 Sokajy Rediredy
Refa nieritreritra ah dia somary gaga kely hoe otran'ny tsy dia "mahazatra" loatra ny hoe manomana ny hoe "rehefa maty aho", ny eo @ malagasy. Eny e, mazava be fa ny anisan'ny tena tanjon'ny hoe fihavanana dia ny hoe fitandrovana ny taranaka sy ny hoe miray hina... mba hamela lova, fahasoavana, soatoavina hoan'ny taranaka faramandimby... zany hoe tena mifantoka be @ hoe ho faty izany ny Ntaolo.
Iaraha mahalala ihany koa ny hoe miara-ory sy hoe fomba malagasy manerana ny nosy ny hoe mamangy @ fahoriana. Satria hoe fanajana ny maty ary indrindraindrindra hoe malahelo sy hoe lasa "olon-tiana"... Ny mahagaga anah anefa dia ny hoe nahoana ary no tsy dia mba misy kozy betsaka ny momba ny hoe "hafatra farany". Tsy hoe testamenta an fa otran'ny hoe hafatra kely hoe... rehefa maty aho dia
1. vomanga sy saonjo (sy ronono?) ny kaly
2. Alefaso ity hira ity:
Eto ampanoratana an'ity ah dia mieritreritra hoe ra misy mahita moa ity? ho ho ho
Laingako izany fa satria... isika tsy ho faty... ary tsy maintsy hipoaka ny tako-bilany!!
Now, let's dress prentetiously, while having a pretentious dinner and pretentiously listening to this.
ca va ca va, imhotep!
06/23,2016 Sokajy Rediredy
06/10,2016 Sokajy Rediredy
04/13,2016 Sokajy Rediredy
joyeux joyoux joyaux!!
entina hamaranana ny 2015
dia @ herin-taona ndray ee
12/31,2015 Sokajy Rediredy
je suis... euh... modelisation
hitako tany ho any...
12/06,2015 Sokajy Rediredy
>> enjeo @ taxi!
09/02,2015 Sokajy Rediredy